Publié parfilazantsaramada	 mai 10, 2013 mai 31, 2013 Laisser un commentaire sur NY FANAHY MAMANTATRA NY ZAVATRA REHETRA!
Ny sofintsika afaka mamantatra feo: mety feo mahafinaritra, mety feo mankadilo koa, ary misy aza feo izay tsy mba ren’ny sofin’olombelona akory toa ny « ultra son » ohatra. Ny masontsika dia mahita ny lokom-bonikazo kanto dia kanto ery. Ny endriky ny faravodilanitra dia mamelona eritreritra ny amin’ny fahatsaràn’ny asan’Andriamanitra; nefa, ao koa ireo zavatra mahatsiravina mampihoronkoditra antsika! Voafetra ihany anefa ny zavatra azon’ny masontsika jerena ka tsy mahita amin’ny maizina isika!
Ny Fanahy kosa dia mamantatra ny zava-miafina , na dia ny ao am-po tsy miloaka aza!
Izy no mitari-dalana ny zanak’Andriamanitra! « Izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra ». Rehefa mandray ny Zanak’Andriamanitra isika dia omeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, ary tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra.
Ny famantarana ny zavatra rehetra ho an’ny zanak’Andriamanitra dia manampy azy amin’ny fahalavorariana ny diany. Koa raha mandeha amin’ny lalan-tsarotra tsy fantatra izy dia ny Fanahy no manampy azy. Ny Fanahy koa anefa dia mahatsiaro ho malahelo rehefa manao izay tsy tiany isika zanak’Andriamanitra. Koa aoka ny zanak’Andriamanitra hazoto hanontany ny Fanahy ao anatiny ary hankato izay lazainy!
« Ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra »; ka mitari-dàlana , sy mampianatra, ary koa mananatra antsika…
Publié parfilazantsaramada mai 10, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorized
NY MPISORONA AMIN’IZAO ANIO IZAO
NY VOKATRY NY FISARAHANA TAMIN’NY TOMPO